Okwu Gị Ọ̀ Ga-agụ Mmetụta Nleta Gị? | Martech Zone
Nyaahụ, edere m otú gbakọọ Okwu gị site na iji MySQL na ntinye ederede blog gị na WordPress. Achọrọ m inyocha posts m iji hụ ma ọ bụrụ na blọọgụ m metụtara oge ole posts m dị. Lee nsonaazụ ndị a!
Nleta Peeji vs. Okwu Count
Nsonazụ ahụ? Na ọnwa isii nke posts kwa ụbọchị (mgbe ụfọdụ ọtụtụ posts kwa ụbọchị) na okwu metụtara ya maka ụbọchị ọ bụla, enwere m ike ikwu na ọnụọgụ nke okwu emeghị ihe dị iche. Ihe mere ihe dị iche bụ na ọ bụ naanị ihe ederede ka ọ dị. Dịka ị pụrụ ịhụ, blọọgụ m anaghị ata ahụhụ mgbe m nwere obere ọrụ ma ọ bụ mgbe m nwere ogologo post.
Igodo na blog na-ede nnukwu ederede, ọ bụghị ede maka engines ọchụchọ! Isiokwu njupụta nwere ike depụta peeji gị nke ọma, ma backlinks sitere na saịtị ndị ọzọ ga-eme ka blog gị gaa n'elu peeji nsonaazụ. M ga-azụ ahịa backlink na ederede isiokwu zuru oke ụbọchị ọ bụla!
Ọ bụrụ na ụdị gị dị ogologo (dị ka m), ị ga-adọta ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ na-enwe mmasị ịlele ọtụtụ nsụpe na ụtọ asụsụ m na-eme. 😉 Ọnụ ọgụgụ nke nleta na blọọgụ m nọgidere na-agbanwe agbanwe ma na-eto eto!
Ọ dị mkpa iburu n'uche na saịtị m tara ahụhụ na okporo ụzọ ọchụchọ engine (ihe dịka 20%) mgbe m gbanwee aha m ma chere dezie na Google.
The anomaly kwupụta ọgwụgwụ bụ n'ihi na-aga n'ihu ewu ewu nke m Mbido Starbucks post - otu n'ime ndị kasị ewu ewu nke a blọọgụ… na kwa otu n'ime ndị fọdụrụ n'ezinụlọ.
Tags: B2c facebooknsonaazụ azụmahịamkpesa ndị ahịaobi ụtọ ndị ahịafacebook maka ahiaAtụmatụ ịzụ ahịa facebookAjụjụmelite nsonaazụiguzosi ike n'iheVidio Ahịamultidomainmyreponooffshore
Aug 28, 2008 na 4: 04 AM
Nnukwu edemede, kwenye na gị 100%. Ekwenyere m na obere ụwa, enweghị oge na yabụ na m na-ede obere akwụkwọ ma ọ bụ naanị isi mgbo.
Aug 29, 2008 na 7: 30 AM
M na-ede mkpumkpu posts n'ihi na m na-atụ egwu nke na-agụ ike ọgwụgwụ. Obi dị m ụtọ ịhụ na nke ahụ ekwesịghị ịbụ nchegbu m kasịnụ.